Umlando kwengqondo iphatha ekutadisheni imithetho ukuthuthukiswa ngomhla psyche womuntu. Isihloko umlando Psychology wehlukile isihloko lokhu isayensi. Ngenxa yalesi sizathu, kumele bahlukanise. Isihloko Psychology - izindlela ke, imithetho kanye amaqiniso yizenzo zabantu engqondo. Kwaphela isikhathi eside le nezesayensi kwakungabantu zezihloko wefilosofi. Futhi ngisho nangemva kokuba ukwahlukana igatsha ahlukene ke uye walondoloza uxhumano ne nefilosofi. Ngaphezu kwalokho, wathonywa eyala ezilandelayo: ethnography, kwezesayensi, kwezokwelapha isiko theory, kwabantu, izibalo, wesayensi yezilimi, ubuhlakani, ubuciko.
Izindlela umlando Psychology
izindlela eziyisisekelo Psychology - lokhu ukuhlolwa, observation and ukuhlola. Emlandweni Psychology - izindlela zomlando obusebenzayo, zomlando zofuzo, oluchaza futhi ngokuphila kwakhe, kanye nomuntu ngokubuza imibuzo aphinde ukuhlaziya izitatimende ngokwengqondo. Eminyakeni yamuva sekwande kakhulu ukuhlaziywa categorical.
Izigaba eyinhloko umlando lo isayensi
Umlando kwengqondo has izigaba eziningana ukuthuthukiswa.
1. Psychology - isayensi zomoya futhi umphefumulo womuntu. Lenchazelo wanikezwa ecishe ibe yizinkulungwane 2. Eminyakeni eminingi edlule. Kuyinto khona ukuthi umphefumulo womuntu wachaza konke into eyinqaba. Wayengumngane zonke okukhona emhlabeni. Umphefumulo siqondwa njengoba inhlangano ethile, owawungumnyaka esizimele umzimba bese uphatha zonke eziphilayo futhi okungezona eziphilayo izinto. zefilosofi ahlonishwayo isikhathi: uSocrates, Democritus, uPlato, u-Aristotle, esingumGreki, Lucretius. Babekholelwa ukuthi umphefumulo - lena okwakuvela ohlotsheni olukhethekile lwenkanyezi ndaba, eyayihlanganisa izakhiwo ezincane eyindilinga - ama-athomu.
2. Psychology - isayensi yingqondo yomuntu. Le ncazelo yabonakala ekhulwini le-17. Ikhono ukuzizwa, ukufuna into, cabanga ngokuthi ukuqaphela. Indlela eyinhloko laqala ukuhlonishwa incazelo amaqiniso futhi okwashiwo abantu ngemuva. A sefilosofi eliqavile isikhathi - Descartes. Waxoxela nomqondo nomphefumulo nomzimba, wabeka umqondo (deterministic) ukuziphatha izisekelo prichinnostnoy. Luhlanganise emzimbeni nasemphefumulweni wazama sefilosofi Spinoza. Wayekholelwa ukuthi ngale ndlela kwengqondo ivumela ukucabangela imihlola zehloko ngama ncamashi umnqopho efanayo futhi ukunemba, njengoba ucwaningo ezishelelayo futhi imigqa e-geometry. Umlando Psychology has a lot of amagama omkhulu: Leibniz (yasungulwa nomqondo engqondweni equlekile), Wolf, J. Locke ..
3. Psychology - isayensi yokuziphatha kwesintu. Yavela kwekhulu lamashumi amabili. umsebenzi wayo ukuba ulinge nokuqaphelisisa yokuthi ungabona (ukuziphatha, ukusabela, ukuziphatha). Ngesikhathi izizathu ezifanayo oholele kwalokho noma ezinye izenzo kunakwe. Kukhona kudingeka kuhlinzekwe isamba sika Psychology njengendlela ehlukene isayensi ezimele. Senzeka ngaleso sikhathi uyashabalala Psychology-thile, njengoba umqondo ukunwetshwa psyche babantu izakhi ngabanye kubonakala kungamanga. William James zasungula indlela sokusebenza. Isebenzisa izindlela self-kuhlola, introspection nesikhathi-nginyathela isinqumo yanoma yiziphi izinkinga. Isazi sokusebenza kwengqondo American kanye nososayensi Watson wadala indlela behaviorist, esebenzisa izindlela lokufundisa izindlela zokuhlola. Watson babekholelwa ukuthi ukuziphatha komuntu izifundo njengoba elibanzi ngangokunokwenzeka, okuyinto eyenzeka kunoma isiphi isimo.
Ukuthuthukiswa kwengqondo eRussia. Highlights
Umlando kwengqondo yasungulwa eRussia. Ngo zangaphambi izinguquko kanye pre-impi sikhathi ukuze inqubo ube Chelpanov Bekhterev, Pavlov, Sechenov, Chelpanov Blonsky, Rubinstein, Basov, Kornilov futhi Kostyuk. Phakathi kwempi yezwe yesibili esungulwe uMnyango Psychology eMoscow State University, eyasungulwa ngo-Psychology zefilosofi yemboni Institute. Ngo ngemva kwempi, nethonya elikhulu emlandweni Psychology kwadingeka Halperin, Smirnov, Leontiev futhi Drudge.
Impi Falklands: umlando ingxabano nasemiphumeleni yaso